Dawladda Kenya oo ciidamo badan soo dhoobtay xadka ay la wadaagto Soomaaliya. – Radio Daljir
Dawladda Kenya oo ciidamo badan soo dhoobtay xadka ay la wadaagto Soomaaliya.
Nairobi, Feb 04 ? Dawladda Kenya ayaa ciidamo aad u tiro badan soo dhoobtay xadka ay la wadaagto Soomaaliya, kuwaasi oo si xooggan looga dareemayo dhaqdhaqaaqooda xudduudka labada waddan ay wadaagaan.
Ciidamadaan oo ah kuwa Militariga Kenya, ayaa muddooyikaan danbe xi xooggan loogu soo daabulayey xudduudda Kenya iyo Soomaaliya ay wadaagaan, waxayna halkaasi ka bilaabeen roondayn ay ku illaalinayaan dhaqdhaqaaqa ka socda soodinta.
Tallaabadaan ayaa dawladda Kenya ku micnaysay in ay uga golleedahay in ay ku adkayso xudduudda ay la leedahay Soomaaliya, kadib markii dhawr jeer urur Al-shabaab ay ku hanjabeen in ay weerari doonaan dalka Kenya haddii aysan dawladda Kenya faraha ka laaban arrimaha Soomaaliya.
Afhayeen u hadlay xukuumadda Kenya, ayaa sheegay tallaabooyinkaan cusub in ay u samaynayaan dhawr arrimood oo mid tahay hanjabaadda Al-shabaab iyo sidoo kala dawladda Soomaaliya oo iyaduna ku goodiday in ay weerari doonta fariisimada mucaaradku ay dalka ku leeyihiin dalka.
Waxaa afhayeenku uu sheegay, haddii dawladdu Soomaalidu ay weerarto fariisamada mucaaradkeeda in ay ka dhalan doono qax iyo barakac aad u baaxadweyn, ayna khasab tahay in dadku u soo barakacaan xagga Kenya, ayna ku soo dhaxmuuman karaan kooxaha mintidiinta ah ee horay ugu hanjabay in ay Kenya weerero ka fulin doonaan.
Dhawr jeer oo hore ayaa dawladda Kenya xirtay xadka ay la leedahay Soomaaliya, iyadoo ka cabsi qabta in wax loo dhimo ammaankeeda, waxaana toddobaaddadii la soo dhafay Kenya lagu xirxiray dad badan oo Soomaali ah kuwaasi oo ay ku jireen madax ka tirsan dawladda Soomaaliya.